Ururarada bulshada ee Mombasa oo wacad ku maray in ay khamiis kasta sameyn doonaan mudaharaad – The Voice of Northeastern Kenya
Ururarada bulshada ee Mombasa oo wacad ku maray in ay khamiis kasta sameyn doonaan mudaharaad
Star FM November 11, 2016
Qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee ka howl gala magaalada Mombasa ee gobolka xeebta dalka ayaa sheegay in ay isbuuc walba maalinta khamiista ah sameyn doonaan mudaharaadyo waaweyn oo ay uga soo hor jeedaan dhaqdhaqaaqyada musuqmaasuqa ee ka jira dalka.
Hay’adahaan ayaa dowladda dhexe si toos ah ugu eedeeyay in laameheeda ay qaataan doorka ugu weyn ee wax is daba marinta ay ka cabanayaan.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalo xeebeedka Mombasa ayaa shalay hakad galay muddo 45 daqiiqadood ah, kadib markii ay qaar ka mid ah wadooyinka isugu soo baxeen dibad baxayaasha ay soo abaabuleen ururada bulshada.
Mudaharaadeyaasha oo ay hor kaceysay hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Haki Africa ayaa xiray wadooyin waaweyn, iyagoo ku dhawaaqayay halku dhigyo lagu dhaliilayo musuqmaasuqa.
Isu soo baxa ay sameyn doonaan maalmaha khamiista ee isbuuc kasta ayey ku tilmaameen kuwo aysan joojin doonin ilaa inta laga soo afjarayo musuqmaasuqa kusii kordhaya Kenya.
Dhawaan ayey ahayd markii ay hay’adaha u dooda xuququl insaanka ee Mombasa ugu baaqeen madaxweyne uHuru Kenyatta in uu xilka iska casilo, maadaama sida ay sheegeen uu ku guul dareystay in uu wax ka qabto mushkiladdaasi.
← Dowladda oo amar ku bixisay in qasab hubka looga qaado shacabka Laikipia
Kenya oo lagu amaanay doorka ay ku leedahay nabad ilaalinta →